ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ် - Khitalin Media
ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ်
အသင့် အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့ လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော် သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေး တစ်ချို့ ဝင်လာပြီး ကျွန်တော့ဟာ ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ်
မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာ မဆောင်ခင်က မိဘအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်မှာနေပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်အခုကျ တစ်ချက်ထဲ ရုတ်တစ်ရက်မှာပဲ သိတောင် မသိထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘေးမှာ အမိန့်နာခံရင်းနဲ့ အိပ်စက်နေရပြန်တယ်ကျွန်တော့ကြောင့် တစ်သက်လုံး အတူနေခဲ့တဲ့ မိဘတွေကို စွန့်ခွာလာခဲ့ပြန်တယ် ▪ ကျွန်တော့ကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ပြုစုရင်း ကျွန်တော့ရဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ စကားလေးတွေနဲ့ သူ ပျော်နေပြန်တယ်
ပြီးတော့ ကျွန်တော့ကိုယ် ကျွန်တော် မေးခွန်းတစ်ချို့ မေးနေမိတယ် ▪ ဒါလဲပဲ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက မိမိရဲ့ ဇနီးမိန်းမကို ရိုက်နှက်နေ နိုင်ကြတာလဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက နှစ်ဘဝအတွက် ရည်စူးပြီး လာခဲ့သူကို တစ်ဘဝတောင် မကုန်သေးဘူး စိတ်ကုန်သွားကြတာလဲ ?
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့လူတွေက မိန်းမနဲ့သားသမီးကို အိမ်မှာ ထားပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Hotel တွေမှာ အစားအသောက်ကောင်းတွေ စားသောက်နေနိုင်ကြတာလဲ ?
တစ်နေ့လုံး ယောကျာ်းလာမှ အတူတူ စားမယ်ဆိုပြီး ထမင်းဝိုင်းလေး အသင့်နဲ့ ကလေးတွေကို လက်ဆေးပေးပြီး ထိုင်စောင့်နေတဲ့ မိန်းမကို ဘာလို့ မေ့နေရပြန်တာလဲ ?
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့ တစ်ချို့တွေက မိန်းမအတွက်တော့ အိမ်ကို ထောင်လို လုပ်ထားလိုက်ကြပြီး ကိုယ်တိုင်ကျတော့ အများသုံး အိမ်သာလို လာချင်တဲ့ အချိန် လာ သွားချင်တဲ့ အချိန် သွားဖြစ်နေကြတာလဲ ?
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တစ်ချို့ တစ်ချို့ တွေက မိမိဇနီးကို မျက်ရည်စက်နဲ့ ညတွေကို ဖြတ်သန်းစေ နေတာလဲ ?
တစ်ချို့ တစ်ချို့က မိန်းမ မိသားစုကို အချိန် မပေးပဲ လမ်းပေါ်မှာပဲ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံး လိုက်နေကြတယ် မိသားစုမှာ ဖခင်ရဲ့ နွေးထွေးမှု့ ဆိုတာ သားသမီးတွေ သိခွင့် မရတော့တာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ?
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ယောကျာ်းတွေ တာဝန် ခံပြီး တာဝန် မယူကြတော့တာလဲ ? ပြေးမယ် ဆိုလဲ ပြေး ဘယ်အထိ ပြေးကြမလဲ ?
ဒီလိုတွေ တွေးပြီး နောက်ဆုံး အဲ့ဒီ့ညမှာ ကျွန်တော် တွေးလိုက်တယ် ကျွန်တော့မှာ အမေ ရှိတယ် ကျွန်တော့မှာ မိန်းမလဲ ရှိတယ် ကျွန်တော် သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးကို ဂုဏ်ယူ လေးစားသင့်တယ် မိန်းမကို ကြင်နာရင်း မိဘကို ရိုသေရင်း ပေါ့
သူတို့ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က ကျွန်တော့ကို အသက်နဲ့ ရင်းပြီး လောကထဲကို ခေါ်ဆောင် လာခဲ့တယ်
နောက်တစ်ယောက်က တစ်လောကလုံးကို စွန့်ခွာပြီး ကျွန်တော့ အနားကို လာခဲ့တဲ့ သူပါ
အမေဆိုတာလဲ တစ်ချိန်က မိန်းမ ဖြစ်ခဲ့တယ်
လက်ရှိ ဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့ မိန်းမ ဆိုတာ ကလည်း တစ်ချိန်မှာ အမေ ဖြစ်အုံး မှာမို့
အမေ့ကို တန်ဖိုး ထားသလို မိန်းမကိုလဲ တန်ဖိုး ထားကြပါ
မိသားစုတိုင်း မိသားစုတိုင်း တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ချစ်ချစ် ခင်ခင် တစ်သက်တာ ပျော်ရွှင်စွာ နေသွားကြရ ပါစေ
မူရင်း စာရေးသူအား credit ပေးပါသည်
ညတဈညရဲ့ အဖွဈအပကျြလေးတဈခုပါ ကြှနျတျော ကုတငျပျေါမှာ မအိပျခငျြသေးပဲ လှဲလိုကျမိတယျ
အသငျ့ အိပျပြျောနရှောတဲ့ ကြှနျတော့ရဲ့ အားနှဲ့နှဲ့ ခဈြဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့ လှပတဲ့ မကျြနှာလေးကို ကြှနျတျော သခြော ကွညျ့နရေငျးကနေ အတှေး တဈခြို့ ဝငျလာပွီး ကြှနျတော့ဟာ ကြှနျတျော တှေးနမေိတယျ
မိနျးကလေးဆိုတာ ဘယျလိုပါလိမျ့ ? ကြှနျတျောနဲ့ မင်ျဂလာ မဆောငျခငျက မိဘအသိုငျးအဝိုငျးရဲ့အခဈြတှနေဲ့ ထိနျးသိမျးမှု့အောကျမှာနပွေီး ကွီးပွငျးလာခဲ့တယျအခုကြ တဈခကျြထဲ ရုတျတဈရကျမှာပဲ သိတောငျ မသိထားတဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ဘေးမှာ အမိနျ့နာခံရငျးနဲ့ အိပျစကျနရေပွနျတယျကြှနျတော့ကွောငျ့ တဈသကျလုံး အတူနခေဲ့တဲ့ မိဘတှကေို စှနျ့ခှာလာခဲ့ပွနျတယျ ▪ ကြှနျတော့ကို ပငျပငျပနျးပနျး ပွုစုရငျး ကြှနျတော့ရဲ့ မပွောပလောကျတဲ့ စကားလေးတှနေဲ့ သူ ပြျောနပွေနျတယျ
ပွီးတော့ ကြှနျတော့ကိုယျ ကြှနျတျော မေးခှနျးတဈခြို့ မေးနမေိတယျ ▪ ဒါလဲပဲ ဘယျလိုဖွဈလို့ တဈခြို့လူတှကေ မိမိရဲ့ ဇနီးမိနျးမကို ရိုကျနှကျနေ နိုငျကွတာလဲဘယျလိုဖွဈလို့ တဈခြို့လူတှကေ နှဈဘဝအတှကျ ရညျစူးပွီး လာခဲ့သူကို တဈဘဝတောငျ မကုနျသေးဘူး စိတျကုနျသှားကွတာလဲ ?
ဘယျလိုဖွဈလို့ တဈခြို့လူတှကေ မိနျးမနဲ့သားသမီးကို အိမျမှာ ထားပွီး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Hotel တှမှော အစားအသောကျကောငျးတှေ စားသောကျနနေိုငျကွတာလဲ ?
တဈနလေုံ့း ယောကျြားလာမှ အတူတူ စားမယျဆိုပွီး ထမငျးဝိုငျးလေး အသငျ့နဲ့ ကလေးတှကေို လကျဆေးပေးပွီး ထိုငျစောငျ့နတေဲ့ မိနျးမကို ဘာလို့ မနေ့ရေပွနျတာလဲ ?
ဘယျလိုဖွဈလို့ တဈခြို့ တဈခြို့တှကေ မိနျးမအတှကျတော့ အိမျကို ထောငျလို လုပျထားလိုကျကွပွီး ကိုယျတိုငျကတြော့ အမြားသုံး အိမျသာလို လာခငျြတဲ့ အခြိနျ လာ သှားခငျြတဲ့ အခြိနျ သှားဖွဈနကွေတာလဲ ?
ဘယျလိုဖွဈလို့ တဈခြို့ တဈခြို့ တှကေ မိမိဇနီးကို မကျြရညျစကျနဲ့ ညတှကေို ဖွတျသနျးစေ နတောလဲ ?
တဈခြို့ တဈခြို့က မိနျးမ မိသားစုကို အခြိနျ မပေးပဲ လမျးပျေါမှာပဲ အခြိနျတှကေို ကုနျဆုံး လိုကျနကွေတယျ မိသားစုမှာ ဖခငျရဲ့ နှေးထှေးမှု့ ဆိုတာ သားသမီးတှေ သိခှငျ့ မရတော့တာ ဘာ့ကွောငျ့လဲ ?
ဘယျလိုဖွဈလို့ ယောကျြားတှေ တာဝနျ ခံပွီး တာဝနျ မယူကွတော့တာလဲ ? ပွေးမယျ ဆိုလဲ ပွေး ဘယျအထိ ပွေးကွမလဲ ?
ဒီလိုတှေ တှေးပွီး နောကျဆုံး အဲ့ဒီ့ညမှာ ကြှနျတျော တှေးလိုကျတယျ ကြှနျတော့မှာ အမေ ရှိတယျ ကြှနျတော့မှာ မိနျးမလဲ ရှိတယျ ကြှနျတျော သူတို့ နှဈယောကျစလုံးကို ဂုဏျယူ လေးစားသငျ့တယျ မိနျးမကို ကွငျနာရငျး မိဘကို ရိုသရေငျး ပေါ့
သူတို့ နှဈယောကျထဲက တဈယောကျက ကြှနျတော့ကို အသကျနဲ့ ရငျးပွီး လောကထဲကို ချေါဆောငျ လာခဲ့တယျ
နောကျတဈယောကျက တဈလောကလုံးကို စှနျ့ခှာပွီး ကြှနျတော့ အနားကို လာခဲ့တဲ့ သူပါ
အမဆေိုတာလဲ တဈခြိနျက မိနျးမ ဖွဈခဲ့တယျ
လကျရှိ ဘေးနားမှာ ရှိနတေဲ့ မိနျးမ ဆိုတာ ကလညျး တဈခြိနျမှာ အမေ ဖွဈအုံး မှာမို့
အမကေို့ တနျဖိုး ထားသလို မိနျးမကိုလဲ တနျဖိုး ထားကွပါ
မိသားစုတိုငျး မိသားစုတိုငျး တဈဦးနဲ့ တဈဦး ခဈြခဈြ ခငျခငျ တဈသကျတာ ပြျောရှငျစှာ နသှေားကွရ ပါစေ
မူရငျး စာရေးသူအား credit ပေးပါသညျ
လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး ကျိန်းသေ ဖြစ်လာမယ့်သူတွေမှာသာ မြင်တွေ့ရမယ့် စရိုက်လက္ခဏာများ
ချစ်သူတွေ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့အဆင့် (၇)ဆင့် ( ချစ်သူတိုင်း ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် )